XOG XASAASI: Maxaa ka ogtahay in mooshin laga diyaarinayo guddoonka Baarlamaanka Puntland? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka ogtahay in mooshin laga diyaarinayo guddoonka Baarlamaanka Puntland?
XOG XASAASI: Maxaa ka ogtahay in mooshin laga diyaarinayo guddoonka Baarlamaanka Puntland?
Garoowe (Halqaran.com) – Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Puntland, ayaa waxa ay diyaarinayaan Mooshin ka dhan ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaasi Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo-daareed).
Xildhibaanadan ayaa doonaya inay xilka ka tuuraan Gudoomiyaha, waxaana eedeyntooda ay tahay waxqabad la’aan ku aadan hanaanka hoggaaminta Baarlamaanka Puntland.
25-ka Bishaan ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u furmo kalfadhiga Baarlamaanka Puntland, ka horna waxaa soo baxday abaabulka ay wadaan Xildhibaanadan ee ku saabsan Mooshinka xil ka qaadista Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Waxaa jirta Xildhibaano ka biyo diidsan Mooshinkaasi oo iminkaba ka sii dagaya in Mooshinkaasi laga keeno Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Puntland.
Xildhibaan C/raxmaan Dhoore iyo Xildhibaan C/raxmaan Xaabiri ayaa ka digay Mooshinkaasi xil ka qaadista ah in laga keeno Gudoomiyaha Baarlamanka Maamulka Puntland.
Waxa ay sheegeen Xildhibaanadan in aanan la joogin waqtigii Mooshin laga keeni lahaay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaasi, islamarkaana loo baahan yahay shaqada uu haayo Gudoomiyaha in lala garab galo.
Lama oga sida uu noqon doono abaabulka ay wadaan Xildhibaanadan ka tirsan Baarlamaanka Puntland ee diyaarinaya Mooshinka ka dhanka ah Gudoomiyaha Baarlamanka Maamulkaasi.
Mooshin laga diyaarinayo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland